U.S "snatch" ndege yekumhara yakarairwa neFrance: bhadhara mari panhandare yendege uye uwedzere Vagadziri uye Vanotengesa - China Factory - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Denda rekudzivirira kwezvirwere
Musha > Nhau > Indasitiri Nhau
Otomatiki Masiki Machine (imwe yeaviri)
Transparent Chiso Shield
U.S. "snatch" ndege yekumhara yakarairwa neFrance: kubhadhara mari panhandare yendege uye kuwedzera
[The US "akabvuta" ndege masiki yakarairwa neFrance: Bhadhara mari panhandare yendege uye wedzera mari]
Sekutaura kwenhau yaApril 1st yeRussia TV station uye yeFrance "Liberation News" munaKubvumbi 1, France â € sSachigaro wePACA Regional Council, Muselli akataura Pakauya boka rezvidziviriro zvekudzivirira zviwitsi kubva kune imwe nyika kuenda kuFrance, Mutengesi wekunze muUnited States akabhadhara zvakananga panhandare yendege uye akawedzera mutengo, achiba masks akarairwa neFrance. Muselli akaudza Russia TV nhasi kuti PACA uye mamwe matunhu akachaira mamirioni makumi matanhatu Muselli akataura kuti masiki aya akarongerwa kusvika muFrance manheru emusi waApril 2, asi akasangana nematambudziko asingatarisirwe muzvinhu, kureva, kukwikwidza kushomashoma kubva kuUnited States. Zvinonzi mangwanani emusi wa1, mupfumuri weAmerica akabhadharira mari yacho panhandare uye akawedzera mutengo, achitenga zvinhu zvese kubva kune anenge akatengesa kunze. Ndege yekutanga yakaronga kuenda kuFrance yakazokwira ndege kuenda kuUnited States. VaFrance zuva nezuva "Vanosunungurwa" vanotsinhira mumushumo wekuti vanhu vekuAmerican vari kuyedza kutenga chero masiki emahara, kukanganisa kukanganisa kwekutumira kune dzimwe nyika. Rimwe risingazivikanwe rakati: "Ivo vanobhadhara zvakapetwa mutengo kunyangwe vasati vaona zvinhu, kana kushandisa mari."
Ndeipi maitiro ekugadzira anogoneka masks
US Chakavanzika Chirevo Mibvunzo Chinese Epidemic Data? VaTrump: Hapana chirevo chakapihwa
Cup mask yemuchina
Cup masiki muchinaMask yemuchina ndeye yakasarudzika-isina-yakarukwa jira yakagadzirwa nekupisa kupurinda, kupeta kuumba, iyo yeyakaverengeka welding, kubvarura tsvina, nzeve tambo bhiriji kuturika uye mamwe maitikisheni kuburitsa akasiyana masiki ane humwe kufirita kuita. Iyo maski zvishandiso haisi yemuchina mumwe chete, zvinoda Iko kushandira pamwe kwemakina michina inopedza maitiro akasiyana. Izvo zvinonyanya kuzivikanwa mask zvigadzirwa mumusika zvinosanganisira; kapu-yakagadzirwa mask yemuchina, isina-yakarukwa flat mask yemuchina, kapu-yakavezwa masiki muchina, 3M9001 / 9002 kupeta masiki muchina, duckbill mask mashini, matatu-mativi guruva mask mask,
Iyo yekudzivirira yekurapa maski inoumbwa nezvikamu zvitatu: rakapetana-rwakatemerwa anti-fog pachena dziviriro pepa, furemu (kana elastic bhendi, musoro-wakaiswa mask) uye anti-off chipanje; iyo anti-fog maski inogona kudzivirira zvinobudirira vashandi vekurapa kuti vagamuchire kubvunzana uye kurapwa Iyo yakasviba inoputika pachiso panguva yekutarisa, uye ine yakanaka yekudzivirira fog basa, iyo inopa pachena yakajeka kurapwa. , Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya mune zvekurapa zvinoda kuchengetedzwa kwechiso chemushandi. Ichi chigadzirwa chinongoshandiswa sechiwande chevashandi vekurapa kusvibisa munhu anoshanda. Izvo zvakanyatsorambidzwa kushandisa chigadzirwa ichi kutsiva michina yekudzivirira yakadai semabhakitiriya uye zvimwe chirwere chinotapukira. .Im anti-fog maski inogona kudzivirira zvinobudirira vashandi vekurapa kubva pakutsvaira tsvina pachiso panguva yekubvunzana uye kurapwa. Iyo chigadzirwa inewo yakanaka anti-fog basa uye inopa yakajeka chiratidzo kurapwa.
Iyo US Food and Drug Administration (FoodandDrugAdminication) inodaidzwa kuti FDA, rinova rimwe remasangano makuru akagadzwa nehurumende yeUS muDhipatimendi rehutano neHuman Services (DHHS) neDhipatimendi reHutano hweHurumende (PHS) .Saka a saiti manejimendi manejimendi, basa reFDA ndere kuona kuchengetedzwa kwemaski, chikafu, mafuta ezviputi, mishonga, zvoutachiona, zvigadzirwa zvekurapa, uye zvigadzirwa zveredhiyo zvinogadzirwa kana kuunzwa muUnited States. Iyo ndeimwe yemasangano ekutanga emubatanidzwa ine basa rayo zvikuru kuchengetedza vatengi.
Certification yeEC inopa hunyanzvi hwakabatana hwekutengesa zvigadzirwa zenyika dzakasiyana siyana mumusika weEurope, uye inoita kuti zviite nyore kutengesa. Chero chero chigadzirwa chinobva kune chero nyika chinopinda muEuropean Union kana European Free Trade Zone chinofanira kuenda kuC certification uye kubatanidza chiratidzo cheEC kune icho chigadzirwa. Naizvozvo, CE advertising ane kupfuure kuti zvigadzirwa kupinda European Union uye European Free Trade Zone nyika.
Disposable yakagadziriswa kabhoni mask
Ndezvipi zvakanakira uye nezvakaipira masks ekurasa
Zvakanakira masks anoraswa ndeaya: akajeka mameseji, anonzwa mushe, akapfava, azere neonlineity, yakanaka kufema, inogona kuchengetedza kudziya, inogona kutambanudzwa, inogona kutora mvura, isina mvura, inogona kusasanganisa magasi ane chepfu, uye mutengo wakaderera.
Ndeupi musiyano pakati peanoraswa masks uye masks ekurapa
Zvivakwa zvakasiyana: masiki anogadzirwa anogadzirwa nezvikamu zviviri zve 28 g isina-yakarukwa machira. Masiki ekurapa anonyanya kugadzirwa neketi imwe chete kana kupfuura emachira asina kuvezwa.
Masiki anowanikwapo pamusika akagadzirwa nezvinhu zvisina kugadzirwa, izvo zvinoda kushandiswa: 1. PP isina-yakarukwa machira, 2. Meltblown jira, 3. Nose bhandi bhandi, 4. Nzeve bhendi uye zvimwe zvinoshandiswa.
Masiki anogadziriswa anoitwa anopfuura matatu matatu magiramu makumi maviri nemasere emachira asina kuvezwa; bhiriji yemhino rakagadzirwa nharaunda-inoshamwaridzana ...
Address: 709, Bhuroka Q3, Mutungamiriri weNyika, Dunhu reFengze, Guta reQuanzhou, Dunhu reFujian, China